2D / 3D ဂိမ်းအတွက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းဂိမ်း (ဥပမာ) ကိုဖန်တီးရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
2D / 3D ဂိမ်းအတွက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းဂိမ်း (ဥပမာ) ကိုဖန်တီးရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဂိမ်းများ ... ဒီအရာအဘို့များစွာသောအသုံးပြုသူများလူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ပ်ကိုဝယ်ကြလော့။ သူတို့မကစားခဲ့ပါလျှင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် PC ကိုနိုင်အောင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော, ဂိမ်းအချို့မျိုးဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်စသည်တို့ကို, မော်ဒယ်များ drawing, programming ကို၏လယ်ပြင်တွင်အထူးအသိပညာရှိသည်ဖို့လိုအပ်သောခဲ့မယ်ဆိုရင် - ။ အခုတော့မဆိုအယ်ဒီတာဆန်းစစ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ အတော်များများကအယ်ဒီတာများ, လမ်းဖြင့်, သူတို့ကိုနားလည်ရန်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူဖြစ်ကြသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ငါကဲ့သို့သောလူကြိုက်များအယ်ဒီတာများအပေါ်မထိချင်ပါတယ်အဖြစ်အချို့သောရိုးရှင်းသောဂိမ်း၏ဖန်တီးမှု disassemble ဤခြေလှမ်းများ၏တဦးတည်း၏ဥပမာတစ်ခု။
1. 2D ဂိမ်းအတွက်အဆိုပါအစီအစဉ်သည်
3D ဂိမ်းဖန်တီး 2. အစီအစဉ်
ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်း - တစ် 2D ဂိမ်းအယ်ဒီတာဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို 3.
2D လက်အောက်တွင် - ဂိမ်း Two-ရှုထောင်နားလည်မှု။ ဥပမာ: ဒီတော့အပေါ် Tetris, ထိုကြောင်-ငါးဖမ်းသမား, Pinball အမျိုးမျိုးကဒ်ဂိမ်းများနှင့်။
ဥပမာအား-2D ဂိမ်း။ ကဒ်ဂိမ်း: Solitaire
ဂိမ်း Maker တွင်ဂိမ်းအတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် ...
ဒီအသေးငယ်တဲ့ဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်အလွယ်ကူဆုံးအယ်ဒီတာတဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအယ်ဒီတာလုံလောက်သောအရည်အသွေးဖန်ဆင်းထားသည်: က (အားလုံးအလိုလိုသိ) စတင်ရန်လွယ်ကူသည်, စသည်တို့တည်းဖြတ်ရေးတ္ထု, အခန်းပေါင်းများအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာကွီးစှာသောအခွင့်အလမ်း ..
အများအားဖြင့်အယ်ဒီတာထိပ်အမြင်နှင့် platform (ဘက်မြင်ကွင်း) နှင့်အတူဂိမ်းပါစေ။ ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများက (ပရိုဂရမ်းမင်းကိုလညျးတတျကြှမျးအနည်းငယ်နေသောသူတို့ကို) အတွက် script များနှင့်ကုဒ်ကိုထည့်သွင်းဖို့အထူးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအယ်ဒီတာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာဝတ္ထု (အနာဂတ်ဇာတ်ကောင်) ဟုသတ်မှတ်နိုင်သက်ရောက်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးမှတ်သားဖို့မမဖြစ်နိုင်ဘူး: အရေအတွက်ကိုရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် - အနည်းငယ်တရာ!
2)2တည်ဆောက်မည်
(ထိုစကားလုံးများ၏ truest သဘောအရ) ကိုခေတ်သစ်ဂိမ်းဒီဇိုင်နာ, ခွင့်ပြုပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော PC ကိုအသုံးပြုသူများသည်ခေတ်သစ်ဂိမ်းလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ထွက် IOS ကို, Android, Linux, Window 7/8, Mac အတွက် Desktop ကို, Web ကို (က HTML 5) နှင့်: ငါသည်ဤအစီအစဉ်၏အကူအညီဖြင့်, ဂိမ်းကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းစေနိုင်သည်, အလေးပေးပြောကြားချင်ပါတယ်။
ဤသည်လုပ်ငန်းခွင်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို GAME ရန်အလွန်ဆင်တူသည် - ဒီနေရာမှာပဲသူတို့ရဲ့အမူအကျင့် (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း) မှတ်ပုံတင်ရန်ထို့နောက်တ္ထုပေါင်းထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးဖန်တီးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ - အအယ်ဒီတာ WYSIWYG ၏နိယာမပေါ်တွင်တည်ဆောက်ဖြစ်ပါတယ် ချက်ချင်းကိုသင်ကစားပွဲကိုအတိုင်းရလဒ်မြင်ရလိမ့်မည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် start ဖို့လုံလောက်တဲ့ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အခမဲ့ဗားရှင်း။ အမျိုးမျိုးသောဗားရှင်းအကြားကွာခြားချက်ဟာ developer များ၏ website တွင်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
(3D - သုံးရှုထောင်ဂိမ်း)
3D ဒီဇိုင်နာများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးတစ်ခုမှာ (များစွာကိုသုံးစွဲသူများလမ်းဖြင့်,3လသက်တမ်းတိုးကာလအပေါ်တစ်ဦးန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်ပေးသောအခမဲ့ဗားရှင်းအဘို့လောက်ပေ၏) ။
3D rad ဒီဇိုင်နာသင်ယူဖို့အလွယ်ဆုံး, လုံးဝနီးပါးမပါပရိုဂရမ်းမင်းဖြစ်ကောင်းကွဲပြားခြားနားသော interaction ကအတွက်တ္ထု၏ကိုသြဒီနိတ်ညွှန်ကြားပေး၏ချွင်းချက်နှင့်အတူလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်။
အင်ဂျင်များ၏အကူအညီဖြင့်နေသူများကဖန်တီးပေးသောဂိမ်း၏လူကြိုက်အများဆုံး format နဲ့ - ဒီပြိုင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ်အပေါ်ကစခရင်ပုံတစ်ဖန်ပြန်လည်အတည်ပြုပြောကြားသည်။
2) စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို 3D
လေးနက်သောဂိမ်းများကိုဖန်တီးလေးနက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသော tool ကိုကို (tautology excuse) ။ ငါကအခြားအင်ဂျင်များနှင့်တည်ဆောက်လေ့လာနေပြီးနောက်အဲဒါကိုပြောင်းဆိုလိုသည်မှာအကြံပြုမယ်လို့ ကျပ်လက်နှင့်အတူ။
စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို 3D အတွက်အထုပ်ကိုသင်အပြည့်အဝ DirectX ကိုနှင့် OpenGL ၏စွမ်းရည်များကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုအင်ဂျင်ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်အစီအစဉ်၏လက်နက်တိုက်ကို 3D မော်ဒယ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း, Shader, မှောင်မိုက်အရိပ်, ဂီတနှင့်အသံနှင့်အတူအလုပ်, ဘုံတာဝန်များကိုများအတွက် script များကိုတစ်ဦးကြီးမားတဲ့စာကြည့်တိုက်၌တည်၏။
ဒီအထုပ်ထဲမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက် - ကကို C # နှင့်ဂျာဗား၌ပရိုဂရမ်းမင်း၏အသိပညာမလိုအပ် - စုစည်းမှာကုဒ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို "ကို manual mode ကို" ၌အပျေါမှာတညျဆောကျရန်လိုအပ်ပေသည်။
3) NeoAxis ဂိမ်း Engine SDK ကို
အခမဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပတ်ဝန်းကျင်ကို 3D အတွက်လုံးဝနီးပါးအားလုံးဂိမ်း! ဒီအစုနှင့်အတူသင်ပြုနှင့်လူမျိုး, နှင့်ဂိမ်းများရိုက်ကူး, Arcade နှင့်စွန့်စားမှုနိုင်ပါတယ် ...
အင်ဂျင်များအတွက်ကွန်ယက်တွင်ဂိမ်း Engine SDK ကိုတာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးဘို့အတွက် add-ons တွေကိုနှင့် extensions တွေကိုအများကြီးရှိပါတယ်: ကားတစ်စီးဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပျံ၏ဥပမာအားဖြင့်ရူပဗေဒ။ extensible စာကြည့်တိုက်၏အကူအညီနှင့်အတူသင်ပင်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားလေးနက်အသိပညာမလိုအပ်ပါဘူး!
Google က Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera နဲ့ Safari က: အထူးကစားသမားမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, built-in အင်ဂျင်, ဂိမ်းကပေါ်ပြူလာ browser များအမျိုးမျိုးအတွက်ကစားနိုင်ပါတယ်စတင်ခဲ့သည်။
ဂိမ်း Engine SDK ကို Non-စီးပွားဖြစ်သုတေသနများအတွက်အခမဲ့အင်ဂျင်အဖြစ်ဖြန့်ဝေသည်။
ဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို - (developer များဂိမ်းနီးပါးမည်သည့်ရှုပ်ထွေးဖန်တီးနိုင်ဆိုကြသည်ပေမယ့်) 2D ဂိမ်းအတွက်အလွန်လူကြိုက်များအယ်ဒီတာရှုပ်ထွေးကြသည်မဟုတ်။
ဒီသေးငယ်တဲ့ဥပမာထဲမှာ, ငါသည်ရုံ Mini-ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ခြေလှမ်းကိုပြသချင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကအရမ်းရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်: မျက်နှာပြင်အစိမ်းရောင်ပန်းသီးစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားနေဇာတ်ကောင် "Sonic," ရွှေ့မည် ...
ဘယ်သူသိအသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုဖြတ်သန်းအတွက်ဖြည့်စွက်, ရိုးရှင်းသောလုပ်ရပ်များနှင့်အတူစတင်ခြင်း, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့ဂိမ်းနှင့်နောက်ဆုံးမှာအမှန်တကယ်ထိခိုက်ဖြစ်လာ! ဤဆောင်းပါး၌ငါ၏အရည်မှန်းချက်အစအဦးကတည်းက, သာရှိရာစတင်ရန်ပြသရန်ဖြစ်ပါသည် - ဒီအရှိဆုံးအဘို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ် ...
ကစားသမားဒါဘွားကစီမံခန့်ခွဲမည်အဖြစ် 1. ဖြစ်ရှိရာ, သူဘာလုပ်လိမ့်မယ်, ဂိမ်းတစ်ခုဇာတ်ကောင်အတူတက်လာပါ။ အသေးစိတ်။
2. အကျင့်စာရိတ္တ, ကအပြန်အလှန်တံ့သောအတူတ္ထုများ၏ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပါ။ ထမ်းရွက်နှင့်ပန်းသီးသူတို့ကိုယ်သူတို့: - သင်က Collection ပန်းသီးကိုဘွားလိမ့်မည်ဆိုပါကဥပမာအားဖြင့်သင်ကအနည်းဆုံးနှစ်ခုပုံရိပ်တွေလိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာဘယ်မှာရှိသနည်းဟုအရေးယူမှုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်: ဒါဟာသင်သည်နောက်ခံလိုအပ်ပါလိမ့်မည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
3. သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်မှအသံ, ဂိမ်းထဲမှာဆော့ကစားပါလိမ့်မယ်သောဂီတကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်ကူးယူပါ။
ဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းအားလုံးစုဆောင်း: ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုရန်လိုအပ်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အားလုံးဂိမ်းနောက်ပိုင်းတွင်ဘို့မေ့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ကျန်ရစ်ပြီရှိပြီးသားစီမံကိန်းကိုမှထည့်သွင်းဖို့နောက်ပိုင်းတွင်တတ်နိုင်သမျှပါလိမ့်မည် ...
1) လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ - sprite များနမူနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့က, control panel ကိုအပေါ်ကို select လုပ်ပါ, မကျြနှာမြား၏ပုံစံအတွက်အထူးခလုတ်ကိုလည်းမရှိ ။ အဆိုပါ Sprite add ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
2) ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကို Sprite ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက် (မလိုအပ်လျှင်) အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
loaded Sprite ။
3) ထိုသို့သင်သည်စီမံကိန်းအားလုံးကိုသင့်ရဲ့ sprite များနမူနာကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ Sonic နှင့်ရောင်စုံပန်းသီး: အစိမ်းရောင်စက်ဝိုင်း, အနီ, လိမ္မော်ရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်အကြှနျုပျ၏အမှု၌5sprite များနမူနာလှည့်။
စီမံကိန်းအတွက် Sprite ။
4) Next ကိုသင်စီမံကိန်းပစ္စည်းများထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ object - ဤဆိုဂိမ်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရာဝတ္ထုအားဖြင့်ဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား၌သငျနှိပ်သောသော့ပေါ် မူတည်. မျက်နှာပြင်ပေါ်ရွှေ့မည်သူကိုဥပမာကစားယူနစ်, Sonic, ရည်ညွှန်းသည်။
အတော်လေးရှုပ်ထွေးဘာသာရပ်နှင့်မဖြစ်နိုင်, မူအရ, သီအိုရီထဲမှာရှင်းပြ - ယေဘုယျအားဖြင့် objects ။ သင်အယ်ဒီတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အဖြစ်, သငျသညျဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုကမ်းလှမ်းရာအရာဝတ္ထု၏အင်္ဂါရပ်များကြီးမားတဲ့စည်းနှင့်အတူအသေးစိတ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအရာဝတ္တုကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ် - ခလုတ်ကိုနှိပ် "object တစ်ခု Add" .
ဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား။ object တစ်ခုထပ်ထည့်ရန်။
5) နောက်ထပ် Sprite (အောက်တွင်။ Screenshot + ထိပ်တန်း left ကြည့်ပါ) ဆက်ပြောသည်အရာဝတ္ထုအဘို့ရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌ - ဇာတ်ကောင် Sonic ။
ထိုအခါအရာဝတ္ထုသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ရပ်များ: များစွာ, ချင်းစီဖြစ်ရပ်အဲဒီမှာဖြစ်နိုင်ပါသည် - သင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုပြောင်းရွေ့သည်, ပြုလုပ်သူနဲ့ဆက်စပ်အသံ, ထိန်းချုပ်မှု, မျက်မှန်နှင့်အခြားကစားဝိသေသလက္ခဏာများ၏အပြုအမူ ..
, ဖြစ်ရပ်တစ်ခု add အမည်တူ၏ button ကို click ရန် - ပြီးတော့ကော်လံအတွက်ညာဘက်, ဖြစ်ရပ်များအတွက်အရေးယူမှုကိုရွေးပါ။ ဥပမာ, မြှားသော့ကိုနှိပ်, အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျား။
ဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား။5ဖြစ်ရပ်များအရာဝတ္ထု Sonic မှဆက်ပြောသည်နေကြသည်: မြှားသော့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်ထဲမှာဇာတ်ကောင်ရွှေ့; ပေါင်းနယ်စပ်အဆိုပါကစားဧရိယာမှာသတ်မှတ်ထားသောအခွအေနေ။
စကားမစပ်အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်သည်ဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုသေးငယ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါ, program ကိုသငျသညျအမှုအရာတွေအများကြီးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်:
- ဇာတ်ကောင်များ၏လှုပ်ရှားမှုကို setting: ရွေ့လျားနေသော၏အမြန်နှုန်း, ခုန်ခွန်အားခုန်, etc; ။
- အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ဂီတအကျင့်ကိုကျင့် overlaying;
- ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အက္ခရာ (အရာဝတ္ထု) ကိုမဖျက်ပစ်စသည်တို့ကို
အရေးကြီး! ဂိမ်းထဲမှာရှိသမျှအရာဝတ္ထုအဘို့သင်သည်သင်၏အဖြစ်အပျက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုရရန်စွယ်စုံနှင့်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေ - သငျမှတျပုံတငျပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးချင်းစီအရာဝတ္ထုများအတွက်ပိုပြီးဖြစ်ရပ်များ။ မူအရပင်ဒီသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်လုပ်ဖို့အတိအကျအဘယ်အရာကိုမသိဘဲ, ကသူတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်ထိုနောကျမှဂိမ်းထဲမှာပြုမူဖို့ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကြီးမားလယ်ပြင်ပါ!
6) နောက်ဆုံးနဲ့အရေးအပါဆုံးလုပ်ရပ်များ၏တဦးတည်း - ကိုအခန်းပေါင်း။ အခန်း - ဂိမ်းဇာတ်စင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, အရာမှာအဆင့်နှင့်သင့်တ္ထုအပြန်အလှန်လိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခန်းတစ်ခန်းကိုဖန်တီးရန်အောက်ပါအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ :.
အခန်း (ဇာတ်စင်ကစား) ထည့်သွင်းခြင်း။
မောက်သုံးပြီးထူထောင်အခန်းကစင်မြင့်ပေါ်မှာငါတို့အရာဝတ္ထုနေရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းဂိမ်း၏နောက်ခံ Customize ဂိမ်းပြတင်းပေါက်၏နာမတော်ကိုတည် ထား. , အမျိုးအစားများကိုသတ်မှတ်, etc ယေဘုယျအားဖြင့် - ။ တစ်ဦးကစမ်းသပ်မြေပြင်စမ်းသပ်ချက်အဘို့နှင့်ဂိမ်းအပေါ်လုပ်ဆောင်နေ။
7) Run / သာမန်စတင်: အ F5 ခလုတ်ကိုသို့မဟုတ် menu ကို နှိပ်. - ရလဒ်ဂိမ်းကို run ရန်။
ဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုဂိမ်းဝင်းဒိုးကိုနှင့်အတူသငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့သင်ရတယ်ဘာစမ်းသပ်မှုများနှင့်ကစားမြင်နိုင်ပါသည်။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌, Sonic ခလုတျကှကျပေါ် မူတည်. ပြောင်းရွှေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Mini-ဂိမ်း၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ (Oh, နှင့်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်အားဖြင့် run အဖြူရောင်အမှတ်, လူများတစ်ဦးရိုင်းအံ့သြစရာများနှင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါကြိမ်ရှိခဲ့သည် ... ).
ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်း, ရလဒ်ဂိမ်းကအရမ်းရိုးရှင်းပြီးစရိုက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏ဖန်ဆင်းခြင်းဥပမာတစ်ခုအလွန်ထှနျးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တ္ထု, sprite များနမူနာ, အသံ, နောက်ခံနဲ့ရေချိုးခန်းနှင့်အတူစမ်းသပ်နှင့်အလုပ်လုပ် - သငျပင်အလွန်ဆင်းရဲ 2D ဂိမ်းကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ အလားတူဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်အကြောင်းကို 10-15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကြောင့်ယခုအထူးအသိပညာရှိသည်ဖို့လိုအပ်သောခဲ့ - လုံလောက်တဲ့လက်ရုံးကိုလှည့်နိုင်စေဖို့။ တိုးတက်မှုကို!
အကောင်းဆုံး! အားလုံးအောင်မြင်သောဂိမ်း-system ကို ...